Knowledge – Page3– Shwe Ba
ငယ်ငယ် ကလောက် ဉာဏ်မေ ကာင်းတော့ဘဲ မေ့တတ် လာတယ် ဆိုပြီး စိတ်မေ ကာင်း ဖြစ်မနေ ပါနဲ့။ ဦးနှောက် ကလည်း ဓားလိုပဲ သွေးလေ ထွက်လေ ဆိုတာကို အကုန်သိ ပြီးကြမှာပါ။ ဒီတော့ မှတ်ဉာဏ်တွေ ကောင်းဖို့ အတွက် ဦးနှောက်အတွက် လေ့ကျင့်ခန်း အချို့ လုပ်ပေးရင် အကောင်းဆုံး
Shwe MM | June 27, 2020
ကန်ဇွန်းဥ ကို မီးဖုတ် (သို့) မီးကင်ပြီး စားစား၊ ပြုတ်ပြီး စားစား အရသာ ရှိ လှပါတယ်။ အရောင် အမျိုးမျိုး ရှိတဲ့ ကန်ဇွန်းဥကိုလည်း ဈေးကွက်မှာ ဝယ်ယူ စားသုံးနိုင်ပါတယ်။ကန်ဇွန်းဥ ကို စားသုံးရင် ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေ ဘယ်လို ရနိုင်မလဲ။ ၁။ ဆီးချို ။ ။ ဆီးချိုဝေဒနာရှင်တွေအတွက်
ချစ်သူ က မိမိကို ချစ်ကြိုက်ပြီးမှ အဆက်အသွယ်ဖြတ်သွားလို့စိတ်ညစ်နေပြီလား ….?ချစ်သူက အတည်တကျ လက်ထပ်မယ်ပြောဆိုပြီး တာဝန်မယူပဲထားသွားခြင်းကိုခံနေရပြီလား ….?အိမ်ထောင်သည် ယောင်္ကျား မယားငယ် ယူထားလို့ အိမ်ရှင်မများ စိတ်သောက ရောက်နေပြီလား ….?လိုအပ်တာကတော့ ….. – စတီးပန်ကန်ပြား ၁ချပ် ဆန် (၁)ဘူး– ကွမ်းရွက် (၃)ရွက် – ဖယောင်းတိုင် အဝါ
အိမ်မှာထား ရင် အိမ် ကိုခိုက်တက်ပြီး အိမ် သားတွေကံဆိုးစေ လို့ မထားသင့် တဲ့ ပစ္စည်းများ
Shwe MM | June 26, 2020
သင့် အိမ်ထဲကိုယူလာတဲ့ ပစ္စည်းတွေက သင့်အတွက်ကံဆိုးခြင်းတွေဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုတာ သင်အမြဲတမ်းသတိထားသင့်ပါတယ်။တ ချို့သောပစ္စည်းတွေက အိမ်ထဲကိုကံဆိုးခြင်းတွေယူလာနိုင်ပြီး အိမ်သားတွေကို သေဆုံးစေတဲ့အထိခိုက်တတ်ပါတယ်။ အခုဖော်ပြမယ့်အရာတွေက သင့်အိမ်မှာသိမ်းမထားသင့်တဲ့ ကံဆိုးစေတဲ့အရာတွေမို့လို့ ဒါတွေကို အမြန်ဆုံးရှင်းလင်းပစ်သင့်ပါတယ်။ (၁) ကျိုးပဲ့နေတဲ့နာရီနဲ့ မှန်အကွဲများ ။ ။ အိမ်အတွင်းမှာ ကျိုးပဲ့နေတဲ့နာရီနဲ့ အက်ရာထင်နေတဲ့မှန်၊ မှန်အကွဲတွေမထားသင့်ပါဘူး။ ဒီလိုကျိုးပဲ့ကွဲအက်နေတဲ့အရာတွေအိမ်ထဲမှာ ရှိနေတဲ့အခါ သင့်ရဲ့ဘဝမှာအဆင်မပြေမှုတွေကို ပိုပြီးကြုံရတတ်ပါတယ်။ (၂)
အိမ်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် မစိုက်အပ်သော အပင်များ အိမ်ဆောက်ရက် ရွေးနည်း အိမ်ဆောက်လ ရွေးနည်း မသုံးအပ်သော သစ် (၈) မျိုး အိမ် ကျောင်း ဆောက်ရာတွင် မပြုအပ်သော အရာများ၊သစ်ပင် ပန်းမန်ဆိုတာ လူတွေအတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ အရာပါ။သဘာဝရာ သီဥတုကို သင့်တင့်မျှတစေသလို သတ္တဝါတွေကိုလည်း အကျိုးပြုစေပါတယ်။မိမိအိမ် ပတ်ဝန်းကျင် ခြံ ထဲ၊ အိမ်
Shwe MM | June 23, 2020
ကြွေး တောင်း လို့ မရ၍ သောက ရောက်နေသူများ မိမိ သားသမီး ချစ်သူ အိမ်ထောင်ဘက်နင့် အဆက်မရ၍ သောက ကြီးနေသူများ အတွက်အရှေ့ဘက် အရပ်တွင် မျက်နာမူ၍ စတီးလင်ပန် ၁ချပ်ပေါ် ကွမ်း၂ရွတ် မောက်ရပ် တင်ပါကွမ်းရွတ်ပေါ ပရုပ်ပြား ၂ချပ် ကွမ်းရွှက်ပေါ တင်ပြီး မီးရှို့ ကာအခြား စတီး
Shwe MM | June 22, 2020
ဒါဖတ်ပြီးမှ FaceApp သုံးပါ။ ဒီကုမ္ပဏီ သည် ရုရှား ကုမ္ပဏီပါ။ ဒီကုမ္ပဏီသည် GDPR (General Data Protection Regulation) ကို လိုက်နာသော ကုမ္ပဏီအဖြစ် စာရင်းသွင်းမထားပါ။ GDPR-compliant မဖြစ်ပါ။ကိုယ်တင်လိုက်တဲ့ ဓာတ်ပုံကို ကိုယ့်ရဲ့ ဖုန်းထဲမှာပဲ သူတို့က ပြုပြင် လိုက်တာ မဟုတ်ပါ။ သူ့တို့ ကုမ္ပဏီရဲ့
လမ်း မှာ သွားရင်း လာရင်း ကောင်မလေးတွေ တွေ့လို့ ဟေ့ချစ်ချစ် လို့ ခေါ်ပြီး ပါးစပ် သရမ်းရင် ပုဒ်မ – ၅၀၉ ထောင်ဒဏ် တစ်နှစ်၊ ကားပေါ်မှာ မိန်းကလေးတွေ ကို မတော်မရော် သွားထိရင် ပုဒ်မ – ၃၅၄ ထောင်ဒဏ် နှစ်နှစ်၊ လင်နဲ့မယား လျှာနဲ့သွားဆိုပြီး
Shwe MM | June 20, 2020
ဆန်ဆေးရေ နဲ့ ခေါင်းလျှော်ကြမယ် ဆန်ေ ဆးရေ ဆိုတာဟာ ကျွန်တော်တို့ နေ့စဉ်စားတဲ့ဆန်ကို ထမင်းအဖြစ်မချက်ခင်မှာ ရေနဲ့ ဆန်ကို ဆေးရာကနေ ရတဲ့ ရေပါ။ကျွန်တော်တို့ အတော်များများကတော့ ဆန်ဆေးရေကို သွန်ပစ်ကြလေ့ရှိပါတယ်။သို့သော် ရှေးယခင်ကတည်း က ဆန်ဆေးရေရဲ့ အကျိုးအာနိသင်ကိုသိပြီး ဆန်ဆေးရေကို အလှအပအတွက်သုံးခဲ့တဲ့ လူတွေလည်းရှိပါတယ်။ သုတေသနပညာရှင် များရဲ့ အဆိုအရ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့